Yini indawo emhlabeni enhle kunazo? Impendulo isobala yalo mbuzo akukwazi, ngoba, njengoba wazi, bangaki abantu - imicabango yabantu abaningi kangaka. Someone like ukudalwa ngezandla zabantu, besesitelekeni ubuhle bayo. Kungaba izakhiwo, izingadi zezimila, noma, isibonelo, a izinkanyezi. Futhi umuntu Uyazazisa ubukhazikhazi imvelo ezintabeni ezingafinyeleleki, ecacile amachibi okwesibhakabhaka, iziphethu, ogwini olunesihlabathi esimhlophe ngisho izintaba-mlilo nomlilo-ukuphefumula! Kumayelana lezi zimangaliso zezwe futhi uyofunda ngokufunda isihloko sethu esikhuluma ngaso.
ukunakwa yakho izindawo 10 amahle emhlabeni, emagumbini emangalisayo zomhlaba, adalwe Imvelo uqobo lwayo. Acindezela ne ubuhle bendalo, uthuli yoMninimandla imibala kanye ubuhle baso ... Kunzima ngisho ukukholelwa ukuthi lesi empeleni kungase kube. Vakashela lapha kufanele okungenani ukuze ubone nje okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi izwe engavamile asiphethe eziningi izimfihlakalo izimfihlo kanjani, akunjalo ixazululwe kuze kube yilolu suku.
IYellowstone National Park, e-USA
Amazing Yellowstone National Park itholakala e-United States ngo-ezintathu zithi: Idaho, Montana futhi Wyoming. Idume iziphethu yayo okumnandi enhle, kodwa akukhona konke ungajabulela. Ngo Yellowstone National Park, emifuleni eminingi, emihosheni nemihume. Kukhona ikhaya lenqwaba zezinyoni nezilwane. Phakathi nohambo kubonakala sengathi ubukele isiteshi "Ukutholwa" bukhoma. Ungabona ngamehlo akho indlela bear ngiwe inyamazane noma kwabathakathi coyote. Lapha ubusa nemvelo, ukwenza kahle ngaphandle kokuqondiswa umuntu, okuyinto ikakhulukazi bahlonishwe.
Ngokukhethekile zezivakashi ezikhangwa uyinkosi Valley of Geysers - Eye. Le entwasahlobo kushisa namabala amagciwane ngemibala ayegcwele. Ukuma umthombo ufana iso futhi kubonakala ukuthi ubukele zonke izivakashi of IYellowstone Park.
IChibi iBaikal, eRussia
Uma ucela abakhileyo Russia, iyiphi indawo emhlabeni enhle kakhulu, bathi ngazwi linye ngokuthi iChibi iBaikal. Ngempela, ngaphandle isimangaliso yokukhanya alinakusho. Izinto ezenziwa abantu unyaka ngamunye ebhubhisa imvelo bese ebhubhisa nemvelo, kodwa Baykal namanje liyaqhubeka lijabulisa abantu nge crystal icacile, izenzakalo engavamile nobuhle acwebile. Leli chibi akuyona kuphela enhle, kodwa futhi kubalulekile ukuze isintu sizuze. Kuyinto ichibi lamanzi amasha esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Abantu bendawo ngisho ukuyibiza kolwandle, ngakho-ke omkhulu.
IBaikal - umthombo wokuphila. Akazange nginqume ezwekazini, kodwa kusuka ezweni elingumakhelwane kuyahluka kakhulu flora zayo nezilwane ezihlukahlukene, ngakho-ke, edonsela lenqwaba izivakashi hhayi kuphela, kodwa futhi ososayensi, abahloli bamazwe.
Ukutadisha izindawo enhle yezwe, ingasaphathwa langa Bora isiqhingi, okungase kushiwo ngokufanele ngokuthi iparele Pacific. Uma ufuna ipharadesi, lokhu futhi kukhona: crystal ecacile amanzi, izimila eziluhlaza, isihlabathi esimhlophe namahhotela elise kwesokudla phezu kwamanzi. Yonke into uzidalela iholide okuphumuzayo kude nesixuku madding nezinkinga zansuku zonke.
Eqinisweni, Bora - zokhahlamba, isipikili nge vertices ezintathu. Iphuzu esiphezulu - eliphakeme Otemanu. Yena eseduze ngaphansi namasundu phakathi kwamanzi azure olwandle.
Islands echweba hit nge ezozibonela ubuhle bayo. Lapha ungaya ku-uhambo ethokozisayo kwamanzi ne-snorkel noma-scuba diving, phakathi kwesikhathi lapho awokuthi kokuhlangana ushaka noma Barracuda. Kodwa ungakhathazeki. Ngoba zingadla ngisho, kodwa kuphela ngaphansi ebhekiwe ngomfundisi abanolwazi.
Kelimutu intabamlilo, Indonesia
Enhliziyweni siqhingi Indonesia Flores kuyinto intabamlilo engavamile kelimutu. Lena indawo emhlabeni enhle kakhulu, futhi konke sibonga engavamile wentaba amachibi, amanzi njalo lowehlukile. Bavele ngemuva ukuqhuma kokugcina okwenzeka eminyakeni engaba ngu-40 edlule.
Ngamunye the machibi unegama lalo. Ngokusho yetinsita zendawo, ziba imiphefumulo abantu abafile. Iphuzu elisentshonalanga intabamlilo kelimutu Lake usekhulile. It oluluhlaza. Lezi ezinye ezimbili basondelene kakhulu futhi zihlukaniswe kuphela udonga wentaba. Lakes amantombazane nabafana oluhlaza futhi Enchanted - abomvu. amanzi abo bayakwazi ukushintsha umbala walo kusuka omnyama obomvu, oluhlaza noma oluluhlaza. Ngokusho yetinsita kwenzeka lapho inhliziyo uthukuthele.
On the River Kunene waseningizimu-ntshonalanga ye-Afrika kuyinto ejabulisayo impophoma Epupa. Ubukhulu balo akuzona njengoba wokuvelela njengoba, ngokwesibonelo, ngesikhathi Niagara Falls, kodwa indawo emangalisayo enhle ukuthi uyakufanelekela ukuba baye waqamba inkondlo ngakho. Nge ukuphakama 37 metres, makehle ukugeleza okusheshayo amanzi, futhi sehla ngaphansi kwelanga kudlala, bakha rainbow elikhanyayo. Kuwufanele nje ukukucabanga, ukuqonda ukuthi yini imizwa engabangela izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Isithombe azibonisi konke lokhu, ngeshwa. Ukuze sithole yokwanda imizwelo, ukuze ubukhazikhazi izimpophoma Epupa kufanele okungenani bhekisisa.
National Park Lencois Maranenses, Brazil
I-Brazilian esiqiwini ngagama romantic Lencois Maranenses - isikhala enkulu 1,000 square metres. km, igcwele ngokuphelele isihlabathi segolide. Nokho, Empeleni, kuba Lencois ehlane, kuba namanzi, futhi amanzi ahlanzekile. Ugwadule ingaphandle nje Amazon, ngakho kukhona ngokuvamile yemvula. Lokhu kuholela yokuthi ichweba akhiwa kwepaki ngamanzi elikhanyayo oluluhlaza efudumele.
Underground Lake Hamilton Pool, USA
E-United States, e -Texas, kuyinto ongavamile Lake Hamilton Pool. Kuyinto kokubili phansi kuthi laba abangaphansi komhlaba. ingxenye yayo komhlaba itholakala ngaphansi itshe omkhulu Arch kancane kancane edlulisela ekujuleni afanayo. I touch yokuqedela lokhu landscape enkulu kuyinto impophoma nenhle, amanzi liphuma ukuphakama ngamamitha ayi-15.
Umfula Cano Cristales, Colombia
Kakhulu izindawo amahle emhlabeni emhlabeni - akuyona kuphela izimpophoma, izintaba, iziphethu. Lezi kwakuhlanganisa umfula emangalisayo Cano Cristales. Lena indawo eyingqayizivele ekukhumbuza umbono wami bangempela kakhulu kwezobuciko ngendwangu Impressionists. Lo mfula uchungechunge whirlpools, Rapids, nezimpophoma ayimigodi. Phuzisani yayo ephawulekayo ohlanzekile phansi kuyabonakala noma ngeso lenyama, Nokho, azikho echibini lezinhlanzi. Lokhu kungenxa ezinye izici eziyingqayizivele siteshi.
Indlu yekuvakasha sikhashana Cano Cristales zipendwe ngemibala ezinhlanu: obomvu, ophuzi, omnyama, oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka. Lokhu imikhiqizo ulwelwe imfucuza, futhi, phakathi konyaka saturation umbala izikimu buthakathaka ke okwandisa futhi.
Izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni - kungcono emagumbini, uma ubheka ukuthi inhliziyo iqala ukushaya ngokushesha ngokwazi ukuthi bonke abase-ziphambi kwamehlo - kuba ngokoqobo. Kuyinto lokhu umuzwa engalibaleki abantu muntu phakathi nokuvakasha kwazo nasemihumeni eziyingqayizivele Waitomo e-New Zealand. Lena ubuciko real nature, lapho ayesebenza izigidi zeminyaka.
Okwesikhathi esithile, kwaba khona impi ulwandle. He qamba ngokucophelela neziqu yinqaba futhi butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi okuyimfihlakalo uhamba kanye izindlela. Kodwa amanzi esebohlile washiya uhlelo olukhulu 150 emihumeni. Kwelinye bukhoma ngokhanyikhanyi kumnandi ezikhazimulayo ukukhanya okukhulu aluhlaza okwesibhakabhaka kanye ebumnyameni, okwenza iqoqo imigede njengesiduli real kakhulu besibhakabhaka esinezinkanyezi! Mayelana nalesi inkulumo: "Kungcono ukubona kanye kuka ukuzwa kayikhulu."
I Waitomo Caves aphethwe zonke izinhlobo izenzakalo: ngobusuku Christmas ehholo Cathedral ukucula a cappella futhi ngezinye izikhathi eziyihlazo abasubathi kakhulu ukuncintisana Alloys emanzini "black".
National Park "KaBraslav Lakes", Belarus
Izifundazwe Belarusian, umngcele Latvia itholakala emangalisayo enhle National Park ngokuthi "Braslavsky emachibini". Kuyinto Switzerland kancane. Endaweni ethile yase-km2 700 zihlakazeke amadamu 50 endaweni nenhle ingqikithi 130 sq. km. Lena esifundeni esiyingqayizivele, lapho kuba khona ukuthula nokuzola.
amahlathi delightfully enhle, umoya ohlanzekile, futhi crystal emanzini acwebile. imizana like elahlekile phakathi amachibi ... Kuyinto uhlobo Atlantis, esekhona namanje futhi kuyamjabulisa zonke izimenywa iholidi alibaleke eziningi imizwelo eyakhayo.
Nampa: izindawo ezinhle kakhulu zomhlaba! Izithombe elithakazelisayo yabo, kodwa izithombe - akusiwona ukuthi! Shesha ukuze ubone konke amehlo ami!
Ukuba okungenani ngenye yezindawo engenhla, uyokwazi ukusho la mazwi ngokuqiniseka: "Lena yindawo emhlabeni enhle kunazo!"
Umhlaba enezici nekuphikisana. Ukuze uqonde lokhu, udinga ukuhamba, ukubheka ezizungezile ubuhle amehlo uvulekile futhi bakwazi umangale. Kude kusuka ezingaqondakali futhi amahle kukhona incazelo, futhi kubalulekile ukuthola charm yayo. Humanity usenayo Igumbi sikhule, kodwa ngabe abantu uzame kanjani, abasoze ukudlula emsebenzini amakhono nezimangaliso Mother Nature.
Chauvet Umgede, France: eyingqayizivele eqoshwe emadwaleni
Memorial Museum NKVD (saseTomsk)
Gulf of Finland Petersburg: Incazelo, isimo sezulu, izithombe
Analog "Flucostat" (eshibhile). Tablets "fluconazole" - kuzibuyekezo, izintengo
Yini okufanele ibe nekhabethe lemithi
Lymph kanye lymph node - yesimiso sokuzivikela salo umzimba wemvelo sika
Iziko faka ne ungaphezulu Glass
Umshini wokuwasha, nokucwila esakhelwe (izithombe)